MacBook kana iPad Pro? Zvinoenderana nezvaunoda | Ndinobva mac
MacBook kana iPad Pro? Zvinoenderana nezvaunoda
Kusvikira nguva pfupi yadarika mutsauko uripo pakati pelaptop nepiritsi zvaive pachena. Kana iwe waida kutakurika, iyo iPad yakakunda. Unogona kuishandisa usingade tafura. Neruoko rumwe unozvitora uye nerumwe iwe unowirirana. Iine MacBook hazvigoneke. Asi kana iwe uchida simba kana imwe desktop desktop, wakarasa iyo laptop.
Nhasi zvinhu zvachinja. Tine pamusika zvine simba iPad Pro inosvika kune Terabyte kugona uye nyowani yekushandisa system, iyo iPadOS izvo zvinoita kuti zviome kwazvo kusarudza imwe sisitimu kana imwe.
Kana iwe parizvino uchida inotakurika Apple komputa, nhasi une sarudzo mbiri: MacBook kana iyo iPad. Ivo vaviri vanokunda pazvinhu zvakasiyana. IPad inotakurika inotakurika, yakanyarara, uye inotonhorera. Iyo Mac inoshanduka-shanduka, inopa kwakawanda kubatana, uye inogona kumhanyisa software yakaoma kunzwisisa.
Unogona kunge uchitoziva kana iwe uchida Mac kana iyo iPad. Kana iwe ukashandisa maapplication ayo anongomhanya pane macOS, kana Kana iwe uchida kubatanidza yakawanda yekuwedzera Hardware, saka MacBook ndiyo yako chete sarudzo. Asi kana iwe uchida iko kwekupedzisira kutakurika kana kana iwe uchida kushandisa yekubata-skrini uye kushandisa inonakidza Apple Penzura, iwe unoda iyo Pro Pro. Ngatitarisei misiyano mikuru.
1 Misiyano mikuru
2 Izvo zvakafanana maficha, iwo mutengo mumwe chete
3 Kunyora uye kugadzirisa zvinyorwa
7 Multitasking uye mafomu
8 MacBook vs iPad: Mutongo
Isa iyo iPad padhuze neMacBook uye iwe uchabva waona misiyano yakawanda. Iyo Mac inouya nekhibhodi uye neTrackpad. Iyo iPad ine yekubata skrini. Iyo MacBook (kana iri yazvino) ine akati wandei USB-C zviteshi. IPad inongokupa imwe Mheni USB-C chiteshi.
Nepo iwe uchigona kuwedzera zviri nyore keyboard uye mbeva kune yako iPad, haugone kuvabvisa kubva kuMacBook yako. Uye haugone kubata chidzitiro cheMac yako. Simba hongu iwe unogona, asi zvese zvaunoita kusiya chiratidzo pachiratidziri.
Izvi ndizvo zvinhu zvekutanga zvekutarisa: saizi yemuviri, chimiro, uye maficha. Kwandiri iyo iPad inokunda zviri nyore, nekuti iri nyore zvakanyanya. Iwe unogona kuwedzera chero Bluetooth keyboard uye mbeva yaunoda. Uye kana iwe uchida neApple Smart Folio iwe une keyboard yakabatana neiyo iPad kutevedzera MacBook. Mazuva ano mamwe mapadhibhokisi eipad ari kubuda kunyangwe neTrackPad.
Kubva pakuonekwa kwePados 13 unogona kubatanidza chero chinhu kune yako iPad. Iwe unogona kubatanidza USB-C Hub kwairi uye wobva wawedzera madhiraivha akaomarara, skrini, zvigadzirwa zvemumhanzi, nezvimwe. Chinhu chega chausingakwanise kubatanidza netambo iprinta, unofanirwa kuzviita newifi.
Zvakare neiyo firmware nyowani iwe unogona kuwedzera yebluetooth mbeva kwairi. Uku kubatanidzwa kutsva kuchiri kwakasvibira, asi kuri kushanda. Unogona kuipa nechishamiso cheApple Penzura. Pano kana izvo zvakanyanya kupfuura iyo TrackPad yeMacBook.
iPad zvakare inorova MacBook mukubatanidza. Iyo Laptop chete inokwanisa kuwana iyo internet kuburikidza newifi. Neiyo iPad iwe unogona kuve neyakabatanidzwa nharembozha yekubatanidza, yakanaka sarudzo apo iwe usina Wi-Fi yekubatanidza.
Panyaya yekuchengetedza, hapana chikonzero chekusarudza MacBook ine hard drive yayo: iyo iPad Pro inogona kutengwa pamwe kusvika kune Terabyte yekuchengetedza kwemukati. Zvikuru.
Kubatana kwe4G LTE ndeimwe mukana mukuru weiyo iPad pamusoro peMacBook.
Izvo zvakafanana maficha, iwo mutengo mumwe chete
A priori iyo MacBook inodhura zvakanyanya kupfuura iyo iPad. Kune mamodheru ePadhaa anodhura € 379 uye MacBooks anodarika € 3.000. Iko hakuna ruvara pano. Asi kana tine kusahadzika kwakakomba pakati peimwe sisitimu kana imwe, tichaenda kunotsvaga kumisikidzwa kweiyo maviri akafanana zvakanyanya maererano nemasikirini esisitimu, kugona uye maficha, uye tinoenda kuchitoro cheApple kuenzanisa mitengo, kuti tione chii chinoitika.
Ngatifungei kuti tinoda timu nyowani. Pasina kubiridzira. Kana uchikwanisa kubata ne 379 Euro iPad, haudi Mac. Saka ngatitsvake maitiro maviri akafanana uye tione kuti anodhura zvakadii.
Isu tinosarudza a 13-inch MacBook ine 8GB ye RAM, uye 512GB SSD yekuchengetedza. Handei ku 1.749 MaEuro.
Uye ikozvino iPad ine zvakafanana maficha. Iyo 12.9-inch iPad Pro, 512GB yekuchengetedza uye WIFI chete, isina mbozhanhare. Iwo ari 1.489 Euro. Uye kutaura chokwadi, isu tinowedzera kavha nekhibhodi Smart Keyboard iyo inodhura 219 Euro. Inoita inokwana 1.708 Euro. Pane chete makumi mana emaeuro emusiyano. Izvo zvakafanana maficha, iwo mutengo mumwe chete.
Kunyora uye kugadzirisa zvinyorwa
Izvi zvatova zvakaoma. Iyo iPad yakanaka pakunyora, kana iwe wawedzera yekunze keyboard. Asi hazvina kunaka kugadzirisa mameseji. Iyo mbeva haigone kuisa chituko pakati petsamba muzwi nekukanya kamwe chete, semuenzaniso. Chokwadi ndechekuti kudyidzana negonzo hakuna kugadziriswa zvakanaka. Kana iwe ukagadzirisa yakawanda yemavara, iwe unoda Mac.
Kana zvasvika pakushanda nema automated maitiro, uine macOS une AppleScript, Shell Scripting, Automator, nezvimwe. Panzvimbo iyoyo iPad inomhanya mapfupi, zviri nyore kushandisa. Uye kunze kwekunge iwe uchida kuita chaiyo zvirongwa, Ipfupi mapfupi ePOSOS ane simba zvakanyanya kupfuura sarudzo dzaunokupa macOS.
Apple Penzura. Chinhu chakanakira iyo iPad.
Apple Penzura inonakidza nharaunda uye inoshanda kwazvo neiyo iPad. Izvo zvinobatsira nekutora anokurumidza manotsi kunyangwe yakatwasuka kubva kukiya skrini, uye yekudhirowa kana kupenda zvinoshamisa chose. Panzvimbo pekutenga inodhura uye yakawanda Wacom yekubatanidza kune yako MacBook, iyo Apple Penzura inongonyora pane iyo iPad skrini. Kunyangwe usati wamboshandisa imwe, unotoziva mashandiro ayo, nekuti inoshanda sepeni kana penzura. Uye zvakadaro inogona zvakare kuve pendi bhurasho, scalpel yekucheka odhiyo kana kunyangwe huta hwekutamba chaiko vhayolini.
Iyo iPad yakanaka pamubhedha (usafunge zvakaipa). Unogona kuverenga iyo iPad sekunge iwe urikuverenga magazini. Unogona kutarisa bhaisikopo naye achimusimudzira pamabvi ako. MacBook inenge isinganyatsogone kukwana pamubhedha wako kana pasofa rako nenzira iyi. Kune rimwe divi, iyo Mac ine yayo keyboard uye zvichingodaro. Iyo iPad zvakare inotakurika uye nyore kubvisa kubva muhomwe yako uchienda.
Laptop inoda nzvimbo yekuitsigira, ingave tafura, kaunda nezvimwe. Kana iwe uchirongedza bvunzo muFinal Cut Pro, uye unofanirwa kuiratidza kumutungamiriri, unogona kuwana bhokisi rekutsigira iyo MacBook.
Multitasking uye mafomu
Kana iwe uchida kuita chimwe chinhu nekombuta yako inosanganisira kushandisa kanopfuura kamwechete application panguva, zvitengere iwe Mac. Iyo iPad inogona kuita zvakawanda, mupfungwa yekuti inogona kushandisa akawanda windows kamwechete, asi zvinotyisa. Kugadzira windows pane iyo iPad kunonetesa. Uye kudhonza uye kudonhedza iyo iPad idambe. Hafu yenguva, iyo mafaera app haangobvumidze iwe kutotanga kudhonza faira.
Kana zvasvika kune maapplication, iyo iPad inobatsira kubva kune mamwe anoshamisa maapplication akaigadzirirwa iyo. Adobe's Lightroom yakanaka. Pixelmator Pro inotonyanya kushamisa. Ulysses inoshanda nenzira imwecheteyo paPadad sezvainoita paMac.I ndinoshandisa Affinity Photo zuva nezuva uye iyo macOS vhezheni ine angangoita akafanana mabasa seiyo iPadOS vhezheni Kunyangwe pandinoishandisa paMac pane mabasa andinopedza paPad Pro kuti ndikwanise kushandisa Apple Penzura.
Nekudaro, zvimwe zvinoshandiswa zvePadad zvinoodza moyo. GarageBand inoshanda zvakanaka paIpad, uye kune dzimwe nzira, asi hapana inoshanda pamwe chete neMac software yemakore apfuura.
Iyi mamiriro haigone kuvandudza, nekuda kweApp Store. Inofananidzwa nema macOS maapplication, iPadOS maapps akadhura zvakanyanya. Uye ndiro dambudziko. Vagadziri veaya havana nzira inoshanda yekuwana mari-refu kubva kubasa ravo.
Vashandisi vanovenga kunyoreswa uye hapana nzira yekuchaja kune avo maapplication ekuvandudza. Uye pasina kuongororwa kweapp kwakakodzera, mitengo inofanirwa kuchengetwa yakadzika zvakakwana kuti itenge kutenga zvakanyanya. Hapana munhu ari kuzoshandisa € 300 pachikumbiro pasina kuyedza kutanga.
Affinity Photo ndeye yekushandisa muenzaniso kune ese macOS uye iPadOS.
MacBook vs iPad: Mutongo
Zviripachena kuti mushandisi wega wega ane zvavanofarira nezvavanoda, uye hapana anokunda kana kurasikirwa. Zvinoenderana neumwe neumwe, uye mashandisiro auchazozvipa. Handina laptop. Ini handidi. Ndine 11-inch iPad Pro uye iMac. Ini ndinoshandisa iyo iPad zuva nezuva kumba uye kana ndichiida kure nemusha. Zvakakosha kumisangano yekubasa, uye pandinogara pasofa muimba yekutandarira. Ini ndinosefa, kutarisa nhevedzano, nhabvu, uye kuverenga iyo nhau ndichidya kudya kwemangwanani mukicheni. Ndiine MacBook ini handidi. Iniwo ndinofanira kutaura kuti kana ndasvika kubasa, nyora maemail, nyora nhau senge panguva ino, gadzirisa mifananidzo uye zvichingodaro, ndinovhara iyo iPad ndogara pamberi peMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook » MacBook kana iPad Pro? Zvinoenderana nezvaunoda
Strava inotopa kuenderana neApple Watch kushanda
Nomad Base Chiteshi Mira, dhizaini uye mhando yekuchaja yako iPhone